Ungaliguqula Kanjani Ibhizinisi Ku-Akhawunti Yomuntu Ku-Pinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayishintsha kanjani i-akhawunti yebhizinisi ibe ngeyakho kuPinterest?
May 12, 2021 0 Comentarios 498
Abantu abaningi banquma shintsha i-akhawunti yakho ye-Pinterest ngezizathu ezahlukahlukene ezenza kube kuhle kakhulu namuhla. Kodwa-ke, ngenxa yalezi zinhlobo zezimo kungenzeka ukuthi banikeze ikhefu noma umkhombandlela omusha emibonweni yabo engaba khona mayelana namaphrojekthi abanawo namuhla.
Ngenkathi kungabonakala njengezinyathelo eziningi ezidingekayo ukufeza i-feat feat bese uthuthela kwi-akhawunti yomuntu siqu, empeleni akukho okuningi okufanele ukwenze ukufeza lelo thuba. Ukuphela kwento okufanele uyikhumbule yilokho ipulatifomu izobuyekeza shintsha.
Uma kwenzeka kunezizathu ezahlukahlukene zokushintsha, kungenzeka ukuthi umkhombandlela wenkampani ungashintsha noma uhlale ekuphumuleni ukuthola amathuba emisebenzi angcono. Ngaphandle kokungabaza, kuwumqondo ophelele ukuhlala usindile futhi ulinde ngomoya ophansi okwenzekayo ngesikhulumi.
Ungashintsha kanjani kusuka ku-akhawunti uye ebhizinisini uye ku-Pinterest?
Njengoba kushiwo ngenhla, i-akhawunti yebhizinisi ivuna ukuthi abantu bangakuthola ngokushesha lokho abakutholayo sesha ngaphakathi kwesikhulumi. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi ukuqala kwezinto zokukhangisa izinto eziningi azisebenzi futhi kuwumqondo omuhle ukuthi uzinike ukuphumula okufanelekile.
Ngokunikezwe konke lokhu, kungenzeka uqale ukushintsha izinto ukwenza ngcono isimo futhi uthole isixazululo esikhona ekhasini. Kuzoba yisikhathi sokwenza izinto zishintshe okuqukethwe bese siqhubeka ngokunqoba kwezibalo.
Izinyathelo zokushintsha i-akhawunti kusuka ebhizinisini iye eyakho
Ngena ku-akhawunti yakho ye-Pinterest njengosuku olujwayelekile
Kufanele uye ngakwesokudla ngaphezulu ukuze ukhethe izinketho
Khetha izilungiselelo ngaphakathi kwekhasi
Iya phezulu ngakwesokunxele bese ufinyelela izilungiselelo ze-akhawunti
Guqula i-akhawunti ibe ngeyebhizinisi iye eyakho
Ngemuva kwalokho kufanele uhlele igama le-akhawunti bese uqala ukwabelana ngokuqukethwe
Uma kwenzeka i-akhawunti iqinisekisiwe, kungenzeka ukuqhubeka nokujabulela le nzuzo. Kuthiwani uma kufanele khumbula ukuthi iPinterest izokwenza ukubuyekeza okuqhubekayo kokuqukethwe ukuze kungabi nankinga ngenxa yokukopela noma ukuvimba ikhasi.
Ungabuyela ku-akhawunti yebhizinisi ku-Pinterest?
Yize ifundwa njengokungenakwenzeka okungenangqondo, uma kungenzeka ukubuyela kupulatifomu yebhizinisi ngemuva kokwenza ushintsho. Kumele ulandele izinyathelo ezibalulwe ngenhla.
Kodwa-ke, umqondo omuhle wokugwema ukuphawula okuphakade noma imibuzo ngaphandle kwesizathu esivela kubasebenzisi, ukwaba inothi yencazelo. Ngaphakathi kwayo kungenzeka ukuthi ukucaciseleka ngokwenzekile kuvele.
Ngenxa yalezi zinhlobo zezimo, kungenzeka ukuthi akunankinga ngokugenca noma ukulahleka kobuciko. Ngokunikezwe lokhu, abasebenzisi bazoqala ukuthembela kakhulu mayelana noma kulokho abakubonayo ukuze bathuthuke usuku nosuku ngaphambi kwezinto abazibonayo kumanethiwekhi omphakathi nasezinkundleni zokuxhumana.
1 Ungashintsha kanjani kusuka ku-akhawunti uye ebhizinisini uye ku-Pinterest?
1.1 Izinyathelo zokushintsha i-akhawunti kusuka ebhizinisini iye eyakho
2 Ungabuyela ku-akhawunti yebhizinisi ku-Pinterest?
Ngingayivula kanjani i-akhawunti yebhizinisi lePinterest?
Ungayifinyelela kanjani inketho "yamavidiyo engiwathanda" ku-YouTube?